Taj Mahal ma Muslimiin baa leh mise Hindu (Sheegashada iyo Xaqiiqda dhabta ah ee jirta) – Filimside.net
Taj Mahal ma Muslimiin baa leh mise Hindu (Sheegashada iyo Xaqiiqda dhabta ah ee jirta)
March 13, 2019 Jabriil Abdikadir
Taariikhda: March 13, 2019
Sheegashada: Xildhibaan reer Hindiya ah iyo qaar ka mid ah qolyaha garabka midig u janjeera ayaa sheegtay in Dhismaha caanka ah ee Taj Mahal uu yahay macbad ay Hindu-gu leeyihiin.
Vinay Katiyar oo ka tirsan xisbiga talada haya ee Bharatiya Janata Party (BJP) ayaa dhawaan dawladda waydiistay in ay badasho magaca iyo astaanta dhismaha, lana qiro in uu dhisay hogaamiye diinta Hindu-ga aaminsanaa.
Warbaahinta ayaa hadalkiisa aad u baahisay, taas ayaana horseeday in uu taagero ka helo kooxo badan oo ka tirsan garabka midig.
Xaqiiqada: ma jirto caddayn la taaban karo oo sheegashadaas lagu xoojiyo. Taas baddalkeedana taariikhyahannada intooda badan iyo dawladda Hindiya waxay isku waafaqeen in uu tusaale wanaagsan u yahay Naqshaqaynta dhismaha ee Muslimiinta Hindiya.
Taariikhda sida rasmiga ah loo diiwaan galiyay ee Hindiya waxay sheegaysaa in hogaamiyihii boqortooyadii Mughal, Shah Jahan uu dhisay Taj Mahal, si loogu xasuusto xaaskiisii Mumtaj.
Mughal-yiinta oo asal ahaan ka yimid bartamaha Aasiya ayaa maamuli jiray inta badan dalalka hadda lakala yiraahdo Hindiya iyo Pakistan qarniyadii 16aad iyo midkii 17aad.
Boqortooyada Mughal waxay xoojisay Islaamka koonfurta Aasiya, waxayna farshaxanka iyo dhaqanka Muslimka ku faafiyeen gobolka oo dhan.
Taj Mahal ayaana tusaale u ah jacaylkii ay u qabeen qurxinta dhismeyaasha.
Waaxda daraasaadka naqshadaynta ee Hindiya oo ay hoos tagaan raadadkii hore ayaa Taj Mahal ku tilmaamay “Dhismihii ugu wanaagsanaa ee boqortooyadii Mughal
Website-ka rasmiga ah ee Taj Mahal ee dawladda ayaa sheegaya “in qaabdhismeedkii boqrtooyadii Mughal uu caddayn u yahay bisaylka qaabaynta ee Muslimiinta marka la barbar dhigo dadkii ay isku xilliga noolaayeen ee kale.
Dhismaha Taj Mahal ayaa sannad kaste soo jiita malaayiin dalxiise yaal ah
Rana Safvi oo taariikh yahan ah ayaa BBC-da u sheegay “in aysan jirin su’aal” keeni karta in dib loogu noqdo taariikhda Taj Mahal, aysanna jirin wax caddayn ah oo loo hayo in halkaas uu macbad ku yaalay.
Waxaa jiri jiray dhisme uu lahaan jiray Jai Singh oo Hindu-ga hogaamin jiray kaas oo meeshaa ku yaalay intii aan la dhisin Taj.
“Shah Jahan ayaana si rasmi ah uga iibsaday isaga. Ruqsad rasmi ah oo la siiyay ayaana ilaa iyo hadda taalla. ruqsadda ayaa sidoo kale tilmaamaysa sida boqortooyadii ay diiwaan galin jirtay waxyaabaha ay qabtaan iyo taariikhdooda” ayuu yiri.
Aragtida in uu macbad yahay
Katiyar ma ahan qofkii u horreeyay ee dalbada in la badalo taariikhda Taj Mahal.
PN Oak oo ahaa taariikh yahan garabka midig u janjeeray ayaa dhismahan ugu yeeray Tejo Mahal buug uu qoray sannadkii 1989 kaa oo uu ugu magac daray taariikhda saxda ah ee Taj Mahal.
Wuxuu ku dooday oo buugga ku qoray in Taj Mahal uu asal ahaan macbad Hindu ahaa, goobtaasna uu dhisay hogaamiye Rajput.
Dawladda ayaa si joogto ah u dayactirta Taj Mahal
Sacchidananda Shevde, oo qoraa ah si dhawna ula shaqeeyay Oak ayaa BBC-da u sheegay in ay tahay in ay dawladdu magacawdo khuburo runta soo bandhigta”.
Wuxuu sheegay in Taj Mahal uusan ahayn dhisme ay Muslimiin sameeyeen ee uu yahay Dhisme Hindu-gu dhiseen
Laakiin websiteka rasmiga ah ee dawladda ee dhismaha Taj Mahal, wuxuu ku qoran dhismahan wuxuu u taagan yahay “qaab dhismeed kulminaya sidii ay wax u naqshadayn jireen Muslimiinta, Hindida iyo Faarisiyiinta”.
Katiyar iyo Shevde labadooduba waxay ku doodayaan in Taj Mahal ay ku yaallaan naqshadayntii calaamadda u ahayd Hindu-ga
“dayaxa ayaa cirifka sare kaga dhagan Taj. Dhaqanka Islaamka dayaxu wuu qaloocaa, dayaxanise ma qalooco, wuxuuna la lixiriiraa dhanka dadka taabacsan Sanam Shiva-ga Hindu-ga.
Waxaa kale oo uu intaas ku daray in Muslimiinta ay mamnuuc ka tahay ubaxyada iyo xayawaanka, haddana dhismaha Taj waad ku arki kartaa ayuu intaas ku daray.
Mukhia ayaase diiday sheeshadaas
“Naqshadayntu waxay markaste xiriir la leedahay, kana soo biqishaa oo saamayn ku yeesha dhaqammo kala duwan. naqshadayntii boqortooyada Mughal-na kuwaas kama duwana.
Wuxuu kale oo uu BBC-da u sheegay in dhismeyaasha Mughal aad ku arki karto calaamad muhiim u ah Hindu-ga sida kan Taj Mahal, balse aad sidoo kalana caleemo iyo ubaxyo ku arki karto dhismayaasha kale ee boqortooyadii Mughal.
Hadda maxaa keenay arrintan?
Tobannaan sano Taj Mahal waxaa loo adeegsan jiray ol’olaha dalxiiska, si loo soo jiito dalxiiseyaal dunida isaga kala yimaadda.
Dad badan oo gabya iyo kuwo wax qora ayaa Sheekada Shah Jahan iyo Mumtaj Mahal soo qaatay si ay jacaylka sharaxaad uga bixiyaan.
Haddaba muxuu sheegashadan ka faa’iidayaa Katiyar?
Hadalkiisan ayaa ku soo aadaya iyadoo ay sare u kacayaan dadka ay Hindu-nimadu la wayn tahay. Siyaasiyiin badan oo ka tirsan xisbiga BJP ayaa jeediyay hadallo kicin ah tan iyo markii Hindu-gu ay talada la wareegeen 2014kii.
Hadalkan u dambeeyay ee Katiyar-na waxay u muuqataa in lagu bartilmaaameedsanayo dadka ay Hindu-gu la wayn tahay.
Hadalladaas oo kalana waxay gacan ka gaystaan in ay dadka ka weeciyaan xaaladaha dhabta ah ee taagan sida shaqo la’aanta, dhaqaalaha iyo arrimaha caafimaadka.
Inkastoo aysan dawladdu ayidin hadalkiisa, haddana kooxo badan oo garabka midig xiga ayaa ku farxi doona in ay ku raacaan.
Koox kuwaas ka mid ahna waxay wakhti dhaw dalbadeen in dadka Hindu-ga aaminsan loo ogolaado in ay ku cibaadaystaan Taj Mahal.
Waxaa Aqrisay 574
Qiyaasta xili hore Kesari oo tijaabada Isniinta ka gudbay Kani waa Hit March 25, 2019
Deepika oo ka dul qaaday Jacqueline Fernandez waxayna Salman la sameyn doontaa Kick 2 March 25, 2019
Hordhaca Bandhiga Caawa Ee Raw March 25, 2019
5-jilaa oo Bollywood-ka ka tirsan kuwaas oo hada xayeysiimaha ugu badan gacanta ku heestaan March 25, 2019
Sawirada Maanta: Weli Miyaad Aragtay Sawirada Amithab Bachchan, Priyanka Chopra, Nick Jones, Shilpa ShettyIyo Aktaro Kale Oo Badan March 25, 2019
10-Jilaa Oo Bollywood-ka Ka Tirsan Sida Ay Taageer Badan Yihiin Barta Twitter (+Sawiro) March 25, 2019
Shah Rukh Khan Oo Lagu Arkay Magaalada Kolkata Isagoo Daawanaayay Ciyaartii Cricket Ee Dhex-martay Kooxdiisa Knight Riders iyo Eden Gardens March 25, 2019